Ucwaningo: Omama abafune bukhazikhazi ngosuku lwabo | Isolezwe
Ucwaningo: Omama abafune bukhazikhazi ngosuku lwabo
Isolezwe / 10 May 2012, 10:47am /
UCWANINGO luveza ukuthi omama abafune bukhazikhazi nazipho ezibizayo ngosuku lwabo kepha bafuna ukwaziswa nokuba nesikhathi esikhethekile nezingane zabo njengoba kwenza uSamantha Montzinger nonina uLinda abathathwa bepheka isidlo sokugubha lolu suku
ABANINGI bazitshela ukuthi isipho esibizayo yiso esingajabulisa omama babo njengoba kugujwa usuku lomama ngeSonto kodwa ucwaningo luveza ukuthi omama abafune bukhazikhazi, bazifunela ukwaziswa nje kuphela.
Lolu cwaningo oluzimele olwenziwe yinkampani iProcter and Gamble luveze ukuthi omama abafune micikilisho nabukhazikhazi bezipho ezibizayo kodwa bafuna abantwana babo ukuthi bakwazi ukubabonga ngakho konke ababenzela kona.
Kulolu cwaningo bakhulume nomama abangu- 3 000 emazweni angu-12.
Le nkampani isanda kuqala umkhankaso womhlaba wonke wokubonga omama, obizwa ngeThank You Mum, okuhloswe ngawo ukubonga omama kumaLondon 2012 Olympics.
Lolu cwaningo luthole ukuthi omama abaningi baseNew Zealand baveze ukuthi isikhathi esiningi bancamela ukungazithengeli lutho ukuze bajabulise abantwana babo.
Bamisa nezimpilo zabo, bangenzi izinto abathanda ukuzenza ukuze banakekele abantwana babo.
Ngenxa yokuzinikela ekukhuliseni abantwana bancamela ngisho ukungaqhubeki nokuzithuthukisa emikhakheni abayifundele.
Amaphesenti angu-63 alabo ababeyingxenye yocwaningo bathe kunzima ukuba ngumama. Batha babazise kakhulu omama babo emuva kokuba ngomama bona uqobo.
Yize ubukeka umkhulu umsebenzi owenziwa ngomama kuyamangaza ukuthi uma bebuzwa ngabafisa ukukuthola ngalolu suku bathi abafuni okukhulu.
Amaphesenti angu-32 abo athe azifunela ukuthi abantwana babo bathi “ngiyabonga mama” lapho kugujwa usuku lomama.